Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဆိုတာ ဘာပါလဲ • Zifam Myanmar
Home » Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဆိုတာ ဘာပါလဲ
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဆိုတာ ဘာပါလဲ
ယခုတလော ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ အကြောင်းနှင့် ပက်သက်ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း (WHO) မှာ ထုတ်ပြန်ထားသော ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများကို Zifam Myanmar Facebook Fan များသိရှိနားလည်စေရန် ဆီလျော်အောင် ဘာသာပြန် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်….
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဆိုတာ ဘာပါလဲ….
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဆိုတာ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကနေ ကူးစက်သော ရောဂါတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟာ တိရိစ္ဆာန်ကနေ လူကို ကူးစက်တတ်သလို လူလူချင်းလဲ ကူးစက်တတ်သော ရောဂါတစ်မျိုးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟု ခေါ်ဆိုကြသလဲ…
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်းမှာ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် သုတေသန ပြုလုပ်ဖို့ရန် အတွက် ထိန်းသိမ်းထားသော မျောက်အုပ်စုထဲမှ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကို ပထမဆုံး စတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းတွင်မှ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟာ လူတွေမှာ ဖြစ်ပွားကြောင်း သိရှိလာခဲ့သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကို ဘယ်နေရာမှာ တွေ့ရှိခဲ့ပါသလဲ…
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကို Monkey Pox ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို သယ်ဆောင်နိုင်သော တိရိစ္ဆာန်များ နှင့် အပူပိုင်းမိုးသစ်တောများရှိရာနေရာများဖြစ်သော အာဖရိက အလယ်ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်းဒေသများမှာ တွေ့ရှိရသည်။
ထို့ပြင် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ အဖြစ်များသော နေရာဒေသများမှ လူများ လာရောက် ကူးလူသွားလာ ဆက်ဆံခြင်းကြောင့် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကို အာဖရိက အလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင် သာမက အခြားသောနိုင်ငံများတွင်လဲ ရံဖန်ရံခါ တွေ့ရှိရတတ်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများက ဘာတွေပါလဲ…
ပုံမှန်အားဖြင့် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ ခံစားရလျှင် ဖျားနာခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများ နာကျင်ခံစားရခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ အားမရှိသလို ခံစားရခြင်း၊ Lymph node အကျိတ်များ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရေပြားတွင် အဖုအပိတ်များ ထွက်ခြင်းတို့ ခံစားရလေ့ရှိသည်။
အဖုအပိတ်များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဖျားပြီး ၁ ရက်ကနေ ၃ ရက်အတွင်း စဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အဖုအပိတ်များသည် ခပ်ပြားပြားပုံစံ ဖြစ်တတ်သလို ဒါမှမဟုတ် အလုံးပုံစံများလဲ ဖြစ်တတ်ပြီး ၎င်းတို့အထဲတွင် အရည်ကြည် သို့မဟုတ် အဝါရောင်အရည်များနှင့် ပြည့်နှက်နေတတ်သည်။
ထို့နောက် အက်ကွဲကာ ခြောက်သွေ့ပြီး ကြွေကျသွားလေ့ရှိသည်။ အဖုအပိတ်အရေအတွက်သည် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မတူတတ်ပေ၊ တစ်ချို့မှာ အနည်းငယ်သာ ရှိတတ်ပြီး တစ်ချို့မှာ ထောင်ချီပြီး ရှိတတ်သည်။ အဖုအပိတ်များသည် မျက်နှာ၊ လက်ဖဝါး နှင့် ခြေဖဝါးတွင် ပိုများလေ့ရှိသည်။ ပါးစပ်၊ မျက်လုံး နှင့် လိင်အင်္ဂါတို့တွင်လည်း ရှိတတ်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ လက္ခဏာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ ပတ်ကနေ ၄ပတ် ကြားလောက် ကြာမြင့်တတ်သည်။ ထို့နောက် ကုသမှု မခံယူလဲ သူ့ဘာသာသူ ပျောက်ကင်း သွားတတ်သည်။ အကယ်၍ မိမိတွင် အထက်ပါ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါနှင့် ဆိုင်သော လက္ခဏာများ ခံစားရလျှင် သို့မဟုတ် Monkey Pox ရောဂါ ခံစားနေရသူ၊ Monkey Pox ရောဂါဟု သံသယရှိသောသူနှင့် ထိတွေ့မိလျှင် နီးစပ်ရာဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွင် ပြသကာ ကုသမှု ခံယူရမည် ဖြစ်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးနိုင်ပါသလား…
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ ခံစားရသူ အများစုမှာ သတင်းပတ်အနည်းငယ်အတွင်း ရောဂါလက္ခဏာများ သူ့ဘာသာသူ ပျောက်ကင်းသွားတတ်သည်။ သို့သော် တစ်ချို့သော လူအနည်းစုတွင် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ၏ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကို ခံစားရရုံသာမက သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်ပွားတတ်သည်။
မွေးကင်းစကလေးများ၊ ကလေးငယ်လေးများ နှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအားလျော့နည်းနေသောလူ တို့သည် ပို၍ ဆိုးရွားသော လက္ခဏာများ ခံစားရတတ်ပြီး Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ၏ ဆိုးရွားလှသော နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါများမှာ အရေပြားနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါများသာမက မျက်စိနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများမှ တဆင့် အမြင်အာရုံဆုံးရူံးသည့်အထိ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟာ တိရိစ္ဆာန်ကနေ လူဆီကို ဘယ်လိုပျံ့နှံ့ပါသလဲ…
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟာ တိရိစ္ဆာန်ကနေ လူဆီကို ပျံနှံပုံမှာ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်ခံထားရသော တိရိစ္ဆာန်ကို ထိတွေ့ရာကနေ ပျံနှံခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကာအကွယ်မပါဘဲ တိရိစ္ဆာန်များကို ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ရှားမည်ဆိုလျှင် တိရိစ္ဆာန်ကနေ လူသို့ ကူးစက်မှုကို လျော့ချနိုင်သည်။
အထူးသဖြင့် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကြောင့် နေမကောင်းနေသော သို့မဟုတ် သေဆုံးသွားသော တိရိစ္ဆာန်တို့၏ အသား၊ သွေးတို့ကို စားသုံးခြင်းကို ရှောင်ရှားရမည်။ ထို့ကြောင့် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ အဖြစ်များသောနိုင်ငံများတွင် တိရိစ္ဆာန်တို့မှ ရရှိသော မည်သည့် အသား၊ မည်သည့် အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို မစားခင် သေချာစွာ ကျက်အောင် ချက်ပြုတ်သင့်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟာ လူလူချင်း ဘယ်လို ကူးစက်ပါသလဲ…
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ၂ ပတ်ကနေ ၄ ပတ်ကြား၊ ရောဂါလက္ခဏာပြနေချိန်တွင် လူလူချင်း ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါလက္ခဏာရှိသူနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမိပါက ကူးစက်ခံရနိုင်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသူ၏ အဖုအပိတ်၊ အနာက ထွက်သောအရည်၊ ပြည်တည်နာ၊ အနာဖေး နှင့် သွေးတို့ကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသူ ထိတွေ့ထားသော အဝတ်အထည်၊ အိပ်ရာ၊ လက်ကိုင်ပဝါ၊ ပန်းကန်၊ ခွက်များမှ တဆင့်လဲ ကူးစက်နိုင်ပါသည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသူ၏ ပါးစပ်အတွင်းရှိ အနာများ၊ တံတွေးများမှ တဆင့်လည်း ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသောသူနှင့် အနီးကပ် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သောသူများ အထူးသဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ အိမ်အကူအလုပ်သမားများ၊ လိင်ဆက်ဆံခဲ့သူများသည် ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ခြေ အလွန်များသည်ဖြစ်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ကနေ သန္ဓေသားလောင်းကိုလည်း အချင်းကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါပိုးရှိနေသော မိခင်ကနေ သန္ဓေသားလောင်း ကလေးဆီသို့ ကလေးမွေးဖွားနေစဉ်၊ ဒါမှမဟုတ် မွေးဖွားပြီးချိန်တွင် အရေပြားချင်းထိတွေ့ရာကနေလည်း ကူးစက်နိုင်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါလက္ခဏာ မပြသောသူကနေတဆင့် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ ကူးစက်နိုင်လား၊ မကူးစက်နိုင်ဘူးလား ဆိုတာကိုတော့ သေချာစွာ မသိရှိပေ။
မည်သူတွေက Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ချေ များပါသလဲ…
မည်သူမဆို Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါလက္ခဏာ ရှိသောလူနာ သို့မဟုတ် တိရိစ္ဆာန် နှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမိလျှင် ကူးစက်ခံရနိုင်ချေ များသည်။ Small Pox ကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသောသူများသည် Monkey Pox ရောဂါကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း အတန်အသင့် ရှိကြသည်။
စိတ်မကောင်းစွာဖြင့် Small Pox ကျောက်ရောဂါမှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာပေါ်တွင် လုံး၀ ပျောက်ကင်းသည်အထိ ကုသနိုင်ခဲ့သောကြောင့် ယနေ့ခေတ် လူငယ်များမှာ Small Pox ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး မထိုးခဲ့ကြရတော့ပေ။ သို့သော် Small Pox ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသော လူကြီးပိုင်းများသည်လည်း အနည်းငယ် ကာကွယ်မူရသော်လည်း မပေါ့ဆသင့်ပေ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် နဲ့ တခြားသူကို မကူးစက်စေရန် ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
မွေးကင်းစကလေးများ၊ ကလေးငယ်များ နှင့် ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကျဆင်းနေသော လူများသည် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ ကူးစက်ခံရလျှင် ပို၍ ဆိုးရွားသော Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ လက္ခဏာများကို ခံစားရပြီး အသက် သေဆုံးနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှာလဲ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါပိုးနဲ့ ထိတွေ့မှု ပိုများနိုင်သောကြောင့် ကူးစက်နိုင်ချေ ပိုများသည်။
မိမိကိုယ်ကိုနဲ့ တခြားသူတွေကို Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်ကြမလဲ…
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဖြစ်နေသူများ၊ သံသယရှိသူများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းမှ ရှောင်ရှားခြင်းဖြင့် ကူးစက်မှုကို လျော့ချနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသည် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသူ လူနာများအား ထိတွေ့ကုသမှုပေးရန် ရှိခဲ့ပါက Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါလူနာများအား တကိုယ်တည်း နေထိုင်ရန်၊ အနာအားလုံးအား ဖုံးအပ်ထားရန် (ဥပမာ-အဖုအပိတ်များကို အဝတ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားရန်) လုပ်ဆောင်ခိုင်းရမည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင်ကလည်း လူနာများအား ကြည့်ရှုလျှင် မျက်နှာဖုံး Mask များကို တပ်ဆင်ထားရမည်။ တတ်နိုင်သမျှ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသူ လူနာများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမူ နည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင် ရှောင်ကျဉ်ရမည်။ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသူ၏ အနာများကို ကိုင်တွယ်ရလျှင်လည်း အကာအကွယ် လက်အိပ်များကို ဝတ်ဆင်ထားရမည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသော လူနာများနှင့် ထိတွေ့ပြီးတိုင်း၊ သို့မဟုတ် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါလူနာများ ထိတွေ့ထားသော အဝတ်အထည်များ၊ အိပ်ရာခင်းများ၊ လက်ကိုင်ပဝါများ နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အားလုံးကို ထိတွေ့ပြီးတိုင်း လက်ကို ဆပ်ပြာ နှင့် ရေဖြင့် ပုံမှန် ဆေးကြောခြင်း၊ Alcohol ပါဝင်သော လက်သန့်ဆေးရည်များဖြင့် ဆေးကြောခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရမည်။
ထို့အပြင် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသော လူနာများ၏ အဝတ်အစားများ၊ လက်ကိုင်ပဝါများ၊ အိပ်ရာခင်းများ နှင့် ပန်းကန်၊ ခွက်များကို ရေနွေးဖြင့် ဆေးကြောခြင်း၊ ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောခြင်းတို့ပါ လုပ်ဆောင်ရမည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသောလူနာ ထိတွေ့ဆက်ဆံထားသော မည်သည့်နေရာကိုမဆို သေချာစွာ ပိုးသတ်ခြင်း၊ ဆေးကြောခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်။
ကလေးတွေမှာ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသလား…
ကလေးတွေဟာ အရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေ၊ လူကြီးတွေထက် ဆိုးရွားသော Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါလက္ခဏာများကို ပိုခံစားရလေ့ရှိသည်။ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ ပိုးဟာ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါရှိသော မိခင်ကနေ သန္ဓေသားလောင်းကို သို့မဟုတ် မွေးကင်းစကလေးကို မွေးဖွားနေစဉ် သို့မဟုတ် မွေးဖွားပြီးပြီးချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကနေ တဆင့် ကူးစက်နိုင်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးရှိပါသလား…
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကို အတော်အသင့် ကာကွယ်မူပေးနိုင်သော Small Pox ကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး တစ်ချို့တော့ ရှိပါသည်။ 2019 ခုနှစ်တုန်းကတော့ Monkey Pox ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် Small Pox ကျောက်ရောဂါအတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေး အသစ်များလည်း ထွက်ပေါ်လာသည်၊ သို့သော် လူအများ သုံးစွဲနိုင်ရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရရှိသေးပေ။
ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ကလဲ ဆေးထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ လက်တွဲကာ ပိုကောင်းသောဆေးများ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ အတိတ်ကာလက Small Pox ကျောက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးထိုးခဲ့ကြရသော သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် Monkey Pox ရောဂါကို အတော်အသင့် ကာကွယ်နိုင်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ထို့အတူ Small Pox ကျောက်ရောဂါမှာ ၁၉၈၀ ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာပေါ်တွင် မျိုးတုန်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် မူလ Small Pox ကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးမှာ မရရှိနိုင်ပေ။ ထိုကြောင့် အသက် ၄၀ သို့မဟုတ် ၅၀ နှစ်အောက် လူများမှာ Small Pox ကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး မထိုးနှံခဲ့ကြရတော့ပေ။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကို ကုသနိုင်ပါသလား…
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါလက္ခဏာများသည် တခါတရံ ကုသဖို့အတွက် မလိုအပ်ပဲ သူ့ဘာသာသူ ပျောက်ကင်းသွားတတ်သည်။ အရေးကြီးတာကတော့ အဖုအပိတ်များကို တတ်နိုင်သမျှ ခြောက်သွေ့အောင် ထားခြင်း သို့မဟုတ် အဝတ်စများဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားခြင်းများ လုပ်ဆောင်ရမည်။
မျက်လုံး၊ ပါးစပ် အတွင်းရှိ မည်သည့် အနာကိုမဆို ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ရှားရမည်။ ပါးစပ်များကို ဆေးကြောခြင်း၊ မျက်စဉ်း ခပ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်၊ သို့သော် Cortisone ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ၊ ဆေးများကို ရှောင်ရှားရမည်။ Vaccinia immune globulin (VIG) ဆေးဝါးကို Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ ပိုမိုဆိုးရွားသော လူနာများတွင် သုံးစွဲနိုင်သည်။
ထို့အပြင် Small Pox ကျောက်ရောဂါကို ကုသရန် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော ကာကွယ်ဆေးဖြစ်သည့် Tecovirmat ကာကွယ်ဆေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကိုလဲ ကုသရန် အသိအမှတ်ပြု ထားခဲ့သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟာ လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်ပါသလား…
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟာ လူတစ်ဦးကနေ တစ်ဦးကို လိင်ဆက်ဆံတာအပါအဝင် အထိအတွေ့ ဆက်ဆံမူကနေတဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ လတ်တလောမှာတော့ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါဟာ လိင်ကနေ (ဥပမာ- အမျိုးသားရဲ သုတ်ရည်၊ အမျိုးသမီးရဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းမှ ထွက်သော အရည်များ၊ စတာတွေကနေ) ဘယ်လို ကူးစက်သလဲဆိုတာ သေချာစွာ မသိရှိသေးပေ။
📌သို့သော် လိင်ဆက်ဆံနေချိန်အတွင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမူကနေတော့ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါအဖုအပိတ်များကို တစ်ခါတစ်ရံ လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်နှင့် ပါးစပ်အတွင်းတွင် တွေ့ရတတ်သည်။
ထိုကနေ့တဆင့် လိင်ဆက်ဆံနေချိန်အတွင်းတွင် ကူးစက်နိုင်သည်။ အဓိကကတော့ အရေပြား နှင့် ပါးစပ်တွင် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါ အနာများ ရှိနေပါက ကူးစက်နိုင်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါအဖုအပိတ်များသည် တစ်ချို့သော လိင်မှတဆင့် ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများဖြစ်သည့် Herpes ရောဂါ၊ ကာလသားရောဂါများနှင့် ဆင်တူနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော လတ်တလောဖြစ်ပွားမှုများမှာ လိင်နှင့်ပက်သက်သော ကျန်းမားရေးဆေးခန်းများတွင် လာပြသော အမျိုးသားများတွင် Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကို တွေ့ရှိနေရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ချေများသူများမှာ လိင်စိတ်တတ်ကြွသောသူများ သို့မဟုတ် လိင်တူဆက်ဆံသောသူများဟု၍ ကွဲပြားခြင်း မရှိပေ။ Monkey Pox မျောက်ကျောက်ရောဂါကူးစက်ခံရသော မည်သူနဲ့မဆို ထိတွေ့ဆက်ဆံဖြစ်ခဲ့လျှင် ကူးစက်ခံနိုင်ရချေ ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် မည်သူမဆို Monkey Pox ရောဂါလက္ခဏာများ ခံစားနေရပြီဆိုလျှင် နီးစပ်ရာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများနှင့် အမြန်ဆုံးပြသကာ အကြံဉာဏ်များ တောင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။
#Zifam #CaringforWellbeing #Monkeypox
Organization, W. H., 2022. World Health Organization. [Online]
Available at: https://www.who.int/…/questions-and…/item/monkeypox/…
[Accessed 20 May 2022].